Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamanii miiliyoona 10 dabre - NuuralHudaa
Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamanii miiliyoona 10 dabre
Ameerikaan Arba’aa kaleessaa lakkoofsa namoota guyyaa tokkotti vaayirasii koroonaa irratti argame guddaa galmeessitee jirti.
Galmeen projektii waa’ee vaayirasii koroonaa hordofuu akka mul’isetti, guyyaa tokko dura lakkoofsi namoota COVID-19n qabamaii 136,000 yoo tahu, Arba’aa kaleessaa ammoo namoonni 144,000 guutuu biyyattii keessaatti guyyaa tokkotti vaayirasichaan qabamuun beekamee jira.
Akka gabaasa kanaatti namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta’u, lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture.
Namoonni 1,421 Arba’aa kaleessaa qofa sababa vaayirasii kanaatiin du’uu gabaafame. Walumaa galatti hanga ammatti Ameerikaa kessatti namoonni miliyoonni 10.4 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta’u, namoonni 241,000 ol ammoo du’uu galmeen Yunivarsitii Johns Hopkins irraa argame ni addeessa.
Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota hanga ammatti vaayirasichaan qabamanii miiliyona 53 kan dhihaate yoo tahu, ummanni miiliyoona 1 fi kuma 300 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du’uu gabaafame.
August 3, 2021 sa;aa 10:57 pm Update tahe